Waa Tuma Somaliland Se Maxaad ka taqaanaa Somaliland?
Sunday 11th February 2018 18:48:53 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
Hadaba akhriste hadii aadan aqoon taariikhda muga iyo miisaanka leh ee Somaliland hada ayaad ka ogaanaysaa in badan.
Waxaad ku ogaanaysaa qormo-qoraaleedkaygan , oo aan qalinka ugu qaatay inaan baro dad badan,oo aan somalilnad ka war heyn martabadaha ay soo martay iyo meeqaamkeeda jiritaaneed. Waana fariin waa jib ku ah inuu ogaado qof kasta oo muwaadin ah.
Hadaba anoo "Fadxi Garaad Ciise" qormo-qoraaleedkaygan ayaan ku faah-faahinayaa somaliland waxay tahay iyo taariikhdeeda oo kooban intaan ka halabsado insha allah.
Somaliland waa dalkii maxmiyadda ahaa ee 26-kii juun 1960-kii gobonimadiisii ka qaatay, boqortooyadii midowday ee ingiriiska iyo waqooyiga Ayrland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
Waana dalkii la odhan jiray Maxmiyadda Somaliland kuna biiray somaliya 1-dii julay 1960-kii si ay u wada curiyaan jamhuuriyadda somaliya (Somali Republic) ee kala soo noqotay gooni-isutaageeda, go'aankii shirkii beelaha Somaliland ee burco lagu qabtay 27-kii April ilaa 15-kii May 1991-dii.
Waxaana gobonimadaasi gacanteena ku jirtay aynu kal soo noqonay 1960-kii ingiriiska, Muddo dhan 4-cisho, Kadib inagoo gacanta si shuruud la'aan ah uga gelinay maamulkii somaliya isagoo uu hogaaminayay madaxweynihii , Aden Cabdulle Cismaan (Aden Cadde)
Kadib is-casilaadii madaxweynihii Aden Cadde waxaa xukun millateri Kula wareegay Xukunki,i keligii taliskii Gen: Maxamed Siyaad Barre, sanadkii 1969kii. in badan ayaa dhageheena kusoo dhacaa siyaad barre hadaynu nahay dhalinyarada Somaliland waxaana markiiba maankaaga kusoo dhacaya falalka fool-xumada xambaarsan ee uu kula kacay dadkeene iyo dalkeena rejiimkii siyaad barre.
Af-gebigaas ka dib waxaa Somaliland mujtamaceedii iyo xuquudoodii dadnimo, uu kula kacay falal cunsurinimo iyo takri fal-ka dhan ah xuquuda dadnimo waxaanu billabay keli taliyhii Siyaad Barre gumeysi hor leh, intaasi kadib Somaliland waxaa u bilaabantay taariikh madow.
Waxaana lagu dhawaaqay ururkii dhaq-dhaqaaqa hubaysn ahaa ee halganka dib u xoraynta gobolada waqooyi, Ee Somali National Movement 'SNM' sanadii 1982-dii.
Halgan adag iyo waayo dagaal oo guulo iyo qasaaro bal eh oo aan halkan lagu soo koobi Karin kadib, ayna sabab u ahaayeen geesiyaashii naftood hurayaasha ahaa ee ka dhiidhiyey gumeyssigii aan geedka loogu soo gaban dadkeena.
Ugu dambeyna waa laga cidhibtiray dalka rejiimkii siyaad barre iyo daba-dhilifyadiisii.
Waxaanu halkaas ku noqonayaa sida waafaqsan dastuurka, dal madax-bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qaran-nimadiisa, kuna magacaaban (Jamhuuriyadda Somaliland).
Dalka jamhuuriyada Somaliland waxa uu fidsan-yahay bed (Area) ahaan dalkii la odhan jiray Maxmiyadda Somaliland oo tilmaan ahaan ku yaalla dhigaha (Latitude) 8-degree ilaa 11-degree 30' waqooyiga dhul badhaha iyo loolka (Longtitude) 42-degree 45 ilaa49-degree bariga jasiiradaha biyaha goboleed, dhulka iyo badaha hoostooda, hawada sare iyo xeebalayda (Continental Shelf).
Jamhuuriyada Somaliland waxay xad la wadaagtaa
Dhinaca waqooyi gacanka cadmeed, dhinaca bari somaliya, dhinaca koonfureed iyo dhinaca galbeed jamhuuriyadda federaalka ah ee itoobiya, dhinaca waqooyi galbeed jamhuuriyadda jabuuti.
Dhulka qaranku waa muqadas, waana laguma xad gud baan.
Magaalo madaxda jamhuuriyadda Somaliland waa hargeisa . qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deganaa dalka Somaliland 26-kii juun 1960-kii iyo ka horba, waxaa loo aqoon-sanyahay muwaadin Somaliland.
Diinta qaranka Somaliland waa diinta ''Islaam''. waxaana geyiga Somaliland ka reeban faafinta diin aan ahayn diinta islaamka
Tirsiga taariikhda waxaa laga raacaa tan Islaamiga ah ee "Hijriyada" iyo tan miilaadiga ah.
Afka rasmiga ah ee Somaliland waa "Af-soomaaliga" afka labaadna waa Af-Carabiga.
Afafka kalena waxaa loo adeegsadaa wixii looga maarmi waayo. Beelaha dega Somaliland waa shan (5) beelood oo waawey waxayna kala yihiin:
Isaaq, Harti, Majeerteen, Gabooye, Ciise.
Waaxana soo maray Somaliland tan iyo markii ay gobonimadeeda kala soo laabatay somaliya, madax weynayaal kala duwan caddadkooda tiro waa, Shan (5) madax-weyne:
Cabdiraxmaan Axmed Cali, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Daahir Riyaale Kaahin, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, Muuse Biixi Cabdi, oo ah madax weynaha hada talada dalka haya.
Nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyada Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo wadaag, dimuqraadiyad, iyo nidaamka xisbiyada badan, Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Somaliland kama badnaan karaan sadex (3).
Hadaba Somaliland waxay baadi goob ay u fuushay geed dheer iyo mid gaabanb-ba
Ku raadinaysaa gobonimadii ay 1960-kii si' shuruud la'aan ah ugu wareejisay
Waxaana si hagar la'aan ah loogu dedaalayaa dhammaan shacabka iyo xukuumadaha talada dalka u kal dambeeyaa sidii ictiraafkii Somaliland ka lumay dib loogu hanan lahaa waxaana baadi goobkaa lagu jiray muddo 27-sanadood ah.
Hadaba waxaan usoo jeedinayaa inaan akhristayaasha sharafta badan ahay aadane hilmaamkana aanu wadaagno hal waxaanan ka halabsaday intii karaankayga ah taariikhda miisaanka dhacdooyin iyo ma hadhooyin mudan in la xuso xambaarsan ee Somaliland.
W/Q: Fadxi Garaad Ciise Uk
Cont: [email protected] or +252634001631
Maxaadiradda Saaka Iyo Karin News [Iimaanka Maxaa Xoojiya] Waxa Soo Jeedinaya Sh Siciid Raage
Maxaadiradda Saaka Iyo Karin News [Ilahay Talo Saaro] Waxa Soo Jeedinaya Sh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun.